रात परेपछि मलाई किन से.क्स चाहना बढी हुन्छ? – Sanjal Nepal
Homeसमाचाररात परेपछि मलाई किन से.क्स चाहना बढी हुन्छ?
रात परेपछि मलाई किन से.क्स चाहना बढी हुन्छ?
February 9, 2021 admin समाचार 2274
हँसिली र स्टाइलिस कपडामा सजिएकी सन्ध्याले आफ्नो उमेर ४० वर्ष पुगेको बताउँदा पत्याउन गाह्रो हुन्छ ।‘तपाईं मुस्किलले ३० वर्षकी देखिनु हुन्छ ।
यसको रहस्य के हो ?’ सन्ध्याको उत्तर थियो, ‘प्रेमी छैन, श्रीमान् छैन, परिवार छैन र तनाव पनि छैन ।’ सन्ध्या बंसल एक नामी कम्पनीमा मार्केटिङ अफिसरका रुपमा काम गर्छिन् । उनी दिल्ली एनसीआरमा फ्ल्याट लिएर एक्लै बस्छिन् । उनी
एक्लै बस्नुको कारण हो, उनमा यौ न चाहना छैन । केटा वा केटी कसैप्रति पनि उनी आकर्षित हुन सक्दिनन्। अर्थात् उनी ‘एसे’क्सुअ’ल’ हुन् ।”
त्यसैले उनले विवाह गरेकी छैनन् । तर, परिवारका विषयमा भने उनको आफ्नै धारणा छ । एउटा सुखी र खुसी परिवारमा श्रीमान–श्रीमती र छोराछोरी
हुनैपर्छ भन्ने मान्यतालाई उनी अस्वीकार गर्छिन् । अझ उनी त आफ्नो पहिचान परिवारको पारम्परिक ढाँचामा नहराओस् भन्ने पनि चाहन्छिन् । उनका अनुसार परिवारको अर्थ हरेक व्यक्तिका लागि अलगअलग हुनसक्छ ।”‘२३–२४ वर्षको उमेरदेखि नै म अरुभन्दा फरक हुँ भन्ने लाग्न थालेका थियो,’ सन्ध्या भन्छिन्, ‘मेरै उमेरका महिलाहरु पे्रमी खोज्न
थालेका थिए । मलाई भने त्यसमा कुनै चासो थिएन ।’ उनलाई पुरुष मन पर्दैन भन्ने पनि होइन ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,उनी भन्छिन्, ‘त्यसबेला मलाई एक पुरुष ज्यादै मनपथ्र्यो । मलाई उनीसँग समय बिताउन रमाइलो लाग्थ्यो ।
समय सँगै बिताउँदै जाँदा उसको मनोबल उच्च हुँदै थियो, जुन सामान्य थियो । तर जब कुरो यौ’नसम्म पुग्यो, मलाई निकै असहज लाग्यो । मलाई यस्तो लाग्यो मेरो शरीरले यौ नलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । मलाई यौ नको जरुरी नै थिएन ।’’सन्ध्या यौ नबाट तर्सिन्न थिइन् ।
December 10, 2020 admin समाचार 1936
काठमाडौ । महानगरीय प्रहरीमा यस्तो घटना आयो जसले प्रहरीको नै होस उडेको छ । एक जना ब्यक्ति जो दिनमा केटा र रातीमा केटी बनेर अ प रा धि क काम गर्थे । महानगरीय प्रहरी बृत्त
January 15, 2021 admin समाचार 2724
November 2, 2020 admin समाचार 4931
LEX 18 agenda conversation: Job club (541122)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511645)
Hello world! (433312)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395871)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131039)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (104022)